जब प्रेमीले तौल कम गर्न दबाब दिए… – Health Post Nepal
जब प्रेमीले तौल कम गर्न दबाब दिए…
२०७८ भदौ ३ गते ८:४८
प्रेमीको धम्कीले हैरान भएकी एक महिलाले एक रिलेशनसिप पोर्टलमा आफ्नो सम्बन्धबारे अन्य मानिसको राय मागिन्। अमेरिकामा बस्ने २५ वर्षीया महिलाले उनी तीन वर्षदेखि आफू रिलेशसनसिपमा रहेको बताइन्। उनका पार्टनरले उनलाई आफ्नो शरीरमा सुधार ल्याउन भन्दै तीन महिनाको समय दिए। उक्त समयमा उनले आफ्नो वजन कम गरिनन् भने ब्रेकअप दिने धम्की उनका प्रेमीले दिए।
महिलाले उक्त पोर्टलमा लेखेकी छन्,
विगत तीन वर्षयता हाम्रो सम्बन्ध एकदम राम्रो थियो। तर, अब मेरो प्रेमीले म प्रति सधैँ गुनासो गर्छ। ऊ चाहन्छ कि म मेरो वजन कम गरुँ ता कि हाम्रो शरीरिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ होस् र इन्टिमेसी बढोस्। यसको लागि उसले मलाई तीन महिनाको समय दिएको छ।
मेरो वजन एकदमै बढेको थियो र एक वर्षमा मैले १८ किलो वजन कम गरिसकेकी छु। सानोबेलामा भएको यौन शोषणका कारण मैले एकदमै ट्रमा झेल्नुपर्यो। मैले मेरो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि अहिले निकै ध्यान दिन थालेको छु। तर, मेरो पाटर्नर मलाई अझ वजन कम गर्न जोड दिइरहेका छन्।
यदि मैले तौल कम गरेँ भने हामीले धेरै सेक्स गर्न सक्छौं। तौल कम गर्न मलाई जम्मा तीन महिनाको समय दिइएको छ ता कि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो होस्। मैले पहिलेदखि नै आफूमा सुधार ल्याइरहेकी छु।
म र उसमा धेरै कुरा मिल्दोजुल्दो छ। अहिलेसम्म हाम्रो सम्बन्ध निकै राम्रो चलिहरको थियो। हामीबीच झगडा पनि कमै हुने गर्थ्यो। केही समयअघिदेखि ऊ आफूलाई निकै ध्यान दिन थालेको छ। ऊ राम्रो लुगा किनेर लगाउन थालेको छ भने थेरापी लिने र व्यायाम पनि गर्छ। उसको यस्तो कोशिस देखेर मलाई राम्रो लाग्छ। उसले मलाई पनि त्यस्तै गर्न दबाब दिन थालेको छ।
म पनि आफ्नो शरीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिन खोजिरहेकी छु। तर, यो एकैदिनमा सम्भव छैन। डिप्रेशन र सानोबेलाको ट्रमाबाट बल्ल बाहिर निस्कन सकेको छु। म मानसिक रुपमा ठीक छु तर मेरो ‘ब्वाइफ्रेन्ड’ मलाई फिट देख्न जोड लगाइरहेको छ।
मसँग राम्रो जागिर छ, र समय मिल्नेबित्तिकै आफ्नो ख्याल राख्छु भने व्यायाम पनि गर्छु। म अहिले पनि अलि मोटी नै छु, तर म अहिले आफैंलाई माया गर्न थालेकी छु भने अत्मविश्वास पनि बढ्न थालेको छ।
मेरो यति मिहिनेत मेरो सम्बन्धमा आउन सकेको छैन। जब सेक्सको कुरा आउँछ, हाम्रो फरक-फरक राय छ। मसँग सेक्स गर्ने इच्छा धेरै छैन भने ऊसँग धेरै छ। ऊ हरेक दिन सेक्स गर्न सक्छ भने म हप्ताको तीन दिन मात्र गर्न चाहन्छु।
म कति सुधार गर्न कोशिस गरिरहेको छु तर, उनी मलाई बारम्बार दबाब दिइरहेका छन्। ऊ भन्छ कि, १६ घण्टा काम गरेर पनि व्यायाम तथा आफ्नो डाइटमा ध्यान दिन सक्छ भने मैले किन सक्दिन? म यसको लागि तयार पनि छु तर, तीन महिनाको दबाबले मलाई तनाव बढाइदिएको छ। आफ्नो पार्टनरलाई खुसी पार्न कोशिस गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि यो सम्बन्ध नै खतम गर्न उचित हुन्छ?
उनको यस्तो कुरामा विभिन्न महिलाहरुले आफूलाई लागेको सल्लाह दिएका थिए।
एक महिलाले लेखिन्, ‘यस्तो लाग्छ, तिम्रो पार्टनर नै यो सम्बन्धबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ। उसले दिएको अल्टिमेटमले जुनै केटीलाई पनि दु:खी पार्न सक्छ। ऊ आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्दैछ। तपाईं नै यो सम्बन्धलाई खत्तम गर्दिनुस्।’
त्यस्तै, अर्की युवतीले लेखेकी छन्, ‘तपाईंको पार्टनरले जस्तो किसिमको हर्कत गरिरहेको छ, यस्तोमा तपाईंको माया र इज्जत कम हुनु स्वभाविक हो। तपाईंको सम्बन्ध पहिलेभन्दा लगभग खत्तम भइसकेको छ। उसले यो सम्बन्ध औपचारिक रुपमै खत्तम गर्न खोज्दैछ। त्यसैकारण पनि विभिन्न गल्तीहरु कोट्याउँदै छ ता कि उसको मनमा केही पश्चताव नहोस् भनेर।’
सबै मानिसको सल्लाहलाई मनन् गर्दै उनले पनि ब्रेकअप गर्ने निर्णय गरेकी छन्।